क्रामाकपाले भेट्यो राज्यपाल; केन्द्र सरकारको जनविरोधी नीतिहरूको कठोर शब्दमा भर्त्सना: आर. बी. राई - खबरम्यागजिन
Homeखबरक्रामाकपाले भेट्यो राज्यपाल; केन्द्र सरकारको जनविरोधी नीतिहरूको कठोर शब्दमा भर्त्सना: आर. बी. राई
June 25, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
एक हप्ताको निम्ति दार्जिलिङ आइपुगेका राज्यका राज्यपाल जयदिप धनकडसँग क्रामाकपा टोलीले आज राजभवनमा भेट गरेको छ।
‘हामीले अलग राज्यको निम्ति राज्यपालसँगको भेटमा जोड दिएका छौं। अहिले अनेक किसिमका कुरा सतहमा आइरहेका छन्। ती सब गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई बङ्ग्याउने चाल हो। माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। गोर्खाल्याण्ड हाम्रो राजनैतिक सुरक्षा अनि राष्ट्रिय चिन्हारीको सवाल हो’, राज्यपालसँगको भेट पछि क्रामाकपा अध्यक्ष आर. बी. राईले भनेका छन्।
राईले सासंद राजु विष्टमाथि पनि प्रतिक्रिया गरेका छन्।
‘दार्जिलिङ संसदिय क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थान पनि यस्तै छ। उनी एक पावा हाम्रो सासंद हुन्। ठूलो एरिया मदेशतिर पर्छ। उनी त्यतैतिर धेर व्यस्त रहन्छन्। तर यहाँको विविध मुद्दाहरू लिएर उनलाई निरन्तर घोंच्ने काम गरिरहेका छौं’, उनले भने।
स्थायी राजनैतिक समाधानको मामिलामा राजु विष्टको इमान्दारिता अनि काम बारे पनि आर. बी. राईले आफ्नो विचार राखेका छन्।
विष्टलाई इमान्दार सांसद बताउँदै उनले भने, ‘ उनले यहाँको म्यान्डेट पाएपछि काम त गर्नैपर्छ। सक्दैनौ, तिमी बस्न पाउँदैनौ। दलले तिमीमाथि के गर्छ, तिमीलाई निकाल्छ अथवा फाल्छ, त्यो हाम्रो समस्या होइन।’
आर. बी. राईले केन्द्र सरकारको अर्थनैतिक नीतिहरूको खुलेर विरोध पनि गरेका छन्।
‘केन्द्र सरकारको खराब अर्थनैतिक नीतिहरूका कारण मुल्यवृद्धि जस्ता समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, जसका कारण निम्न मध्यम वर्गिय जनता व्यापक समस्यामा परेका छन्’, उनले भने, ‘चरम आर्थिक सङ्कटको यस्तो अवस्थामा हामी केन्द्र सरकारको जनविरोधी नीतिहरूको कठोर शब्दमा भर्त्सना गर्छौं।’
‘एकातिर पुँजीपतिहरू करोडौं पैसा लुटेर भागिरहेका छन्। अर्कोतिर लकडाउनको कारण जनताको अवस्था खस्किरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्रोह उठ्नुपर्ने हो’, उनले थपे।
आफूलाई मार्क्सवादी विचारधाराको बताउने दल क्रामाकपाले भारतीय जनता पार्टीसँग गठबन्धन गरेपछि दलको विचारधारालाई लिएर धेरै आलोचना भइरहेको छ।
भाजपाको गठबन्धन दल भएको कारण सरकारको लापरवाहीमा क्रामाकपा पनि जिम्मेवार बन्छ भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, ‘हो। काँध जोडेपछि जिम्मेवारी बन्छ। तर साथीले काम बिगारे माफी छ भन्ने हामी होइनौं। भाजपासँग हाम्रो आलोचनात्मक सहयोगको सम्बन्ध हो।’
मस्तिष्कघातपछि वरिष्ठ कवि वैरागी काइँला अस्पतालमा